Kedu ihe ha bụ, olee etu ha si dị mkpa na etu esi akpụpụta ogbu mmiri? Netwọk Mgbasa Ozi
Portillo nke German | | Ciencia, Meteorology
Na mbara ala a, ihe ọ bụla na-agagharị na-achọ ka a na-akwagharị ya. Nke ahụ bụ, ikike na-akpali ihe ịkwaga, ebe ọ bụ na ọ gaghị eme ya n'onwe ya. Ihe yiri nke a na-eme n’oké osimiri.
Anyi anula mgbe nile banyere oke osimiri. Mmetụta ya, mkpa, mmetụta ya na ihu igwe, wdg. Agbanyeghị, anyị nwere ike ọ maghị n'ezie etu oke osimiri ndị a si amalite. Injin nke na-ebugharị mmiri oke osimiri na - eme ya ihe jikọtara ọnụ nke ifufe, ebili mmiri na njupụta nke mmiri. Tụkwasị na nke a, mmegharị ndị a na-akpata mgbanwe dị iche iche nke oke mmiri nke igwe latitude dị iche iche ma na-emekwa ka mmegharị. You chọrọ ịmatakwu banyere osimiri mmiri?
1 Mkpa oke osimiri mmiri
2 Otú mmiri si asọpụta n’oké osimiri
3 Ihu mmiri dị n’elu ala
4 Mmiri miri emi
5 Osimiri na-asọ
6 Ihe atụ nke osimiri
6.1 Antarctic Circumpolar Ugbu a
6.2 Ọsọ mmiri
6.3 California Ugbu a
Mkpa oke osimiri mmiri
Mmiri ndị a nke mmiri mmiri dị ezigbo mkpa ebe ọ bụ na mpaghara ebe mmiri na-agagharị, ọ bụ ebe a na-enwekarị ọtụtụ nri na, yana, nke biodiversity. Ọ bụ ekele maka mmegharị oge niile site na ihe mmiri nke oke osimiri dị iche iche gburugburu ụwa chebere njirimara ha maka ọtụtụ nde afọ.
Osimiri oke osimiri abughi nani na ebufe nri, kamakwa na-eme njem di otutu nke na-ebu ike oku. Nke a na-enyere aka nkesa nke okpomọkụ, nnu na ntule na nkuku nile nke uwa. Nye ọtụtụ ihe ndị dị ndụ bi n’osimiri, oke osimiri na-asọpụta dị oke mkpa maka ibuga ihe ndị na-edozi ahụ, nkwụsi ike nke okpomoku na ogologo mbugharị.
Ihe ọzọ dị mkpa ha nwere n’ụwa niile bụ na ha nwere nnukwu mmetụta na ihu igwe. Mmiri mmiri na-emepụta mmiri ozuzo, ọnọdụ ihu igwe dị ka El Niño na ọtụtụ ndị ọzọ. Na mgbakwunye, n'ihi oke osimiri, mmiri na-arụpụta ihe.
Otú mmiri si asọpụta n’oké osimiri
Dịka anyị kwurula na mbụ, mmiri mmiri bụ mmegharị nke mmiri na-eme n'ime oke osimiri na ihe kpatara site na ihe dị iche iche dịka ifufe, mgbanwe salinity na ọnọdụ okpomọkụ. Oke osimiri a nwere ike ịbụ ma nke miri emi ma nke miri emi n'ihi mgbanwe nke njupụta nke mmiri.
Ebumnuche nke mmiri dị elu bụ n'ihi ihe ikuku na-eme. Ikuku na-aga n’akụkụ nke mpaghara ebe enwere ike ikuku ikuku. Yabụ, ọ bụrụ na ifufe hapụ oke osimiri, ndị a ga-akwaga na mpaghara ebe nrụgide na-adịchaghị adị.
Ebili mmiri ga-erute mgbanwe na okpomọkụ, nnu nnu na njupụta. Mmiri ndị kasị sie ike na-agbada na ala oké osimiri. Mmiri mmiri na-adabere na ogo nke salinity na ọnọdụ okpomọkụ. Mmiri dị jụụ na-adịkarị ụba ma na-aga n'oké osimiri, na-ebepụ mmiri ndị ọzọ na-ekpo ọkụ n'elu ala. Mmeghari a nke oke mmiri na - ebuputa mmiri mmiri.
N'otu aka ahụ, mmiri nnu ndị ọzọ dị ụba ma ga-agbadata, na-agbasa mmiri dị ala karịa, na -emepụta mmegharị nke igwe mmadụ.
Ihu mmiri dị n’elu ala
A na-emetụta mmiri mmiri ndị a n'elu nkesa nke kọntinent na ntụgharị ụwa. Ọnụ ọgụgụ nke radieshon nke na-adaba na mmiri na redistribution nke okpomọkụ na-emetụtakwa njirimara nke mmiri ndị a.
N’Ebe Ugwu theywa, ha na-agagharị na usoro okirikiri. Na Southern Hemisphere ha na-agagharị n'ụzọ okirikiri na usoro mgbochi na-emegharị elekere.
Dịka anyị kwurula na mbụ, ikesa nri na mmiri na-adabere n'osimiri. Ifufe ahia nke na-adaba n’ebe ọdịda anyanwụ na-ebugharị mmiri ndị a na ntụziaka ahụ, na-ekwe ka mmiri oyi, mmiri miri emi nwere ọtụtụ ihe na-edozi. Mpaghara ndị a mejupụtara Outcrops. Ha bụ mpaghara ndị bara ọgaranya na ịkụ azụ, a na-ahụ ihe kachasị mkpa n'ụsọ mmiri nke Peru na California, na America na n'ụsọ mmiri nke Sahara, Kalahari na Namibia, n'Africa.
Mmiri miri emi
Mmiri dị omimi bụ n'ihi ọdịiche dị na okpomọkụ na salinity. A na-akpọ ha iyi thermohaline. Ihe odide nke oke mmiri na ala nke ụwa na-agba ya na-emetụtakarị ha.
Ihe a na-akpọ belt conveyor Oceanic na North Atlantic ma na-ebute mmiri oyi na mmiri dị egwu, nke Arctic ugbu a. Ọ na-ekpu miri emi na-agbada ndịda. Ozugbo ị gafere akara akara, na-agafe latitude latitude, mmiri iyi na-ebili mgbe iyi ọzọ nke mmiri oyi na-asọ. Nke ahụ dị ugbu a bụ nke dị ugbu a bụ oge Antarctic. Ngagharị nke iyi ndị a na-adị nwayọ nwayọ site na 2 ruo 40 cm / s ma nwee ike ịnwe ụzọ na-abụghị akụkụ mmiri ahụ.
Mgbe ị na-arịgo ogbu mmiri dị omimi, a na-emepụta ọpụpụ, ebe ọ ga-ekwe omume ịmị mkpụrụ azụ dị mma.
A na - eme mmiri ndị a site na mmegharị nke mmiri kpatara site na mma nke ọnwa na Earth na ike ndọda. Mgbe ebili mmiri na-arị elu ma ọ bụ na-ada, mmegharị nke mmiri na-eme ka mmiri dị ugbu a. Mmiri ndị a na-adị nwayọ nwayọ ma na-enwecha mmetụta n’ahụ ike mmiri mmiri.
Ihe atụ nke osimiri
N'ụwa niile, e nwere osimiri osimiri na-asọpụta maka mkpa ha dị.
Antarctic Circumpolar Ugbu a
Antarctic Circumpolar Current bụ oke osimiri oyi na-asọ site na ọdịda anyanwụ ruo n'akụkụ ọwụwa anyanwụ gburugburu Antarctica, n'otu ụzọ ahụ na ntụgharị ụwa. Nke a bụ n'ihi na ugbu a ọ hụghị kọntinent ọ bụla na ọnọdụ ya niile na-egbochi mgbasa ya.
Osimiri Gulf nwere nkezi obosara nke 80-150km na omimi n'etiti 800 na 1200m. Ọsọ ọsọ kachasị elu dị nso n'elu ma na-agbada na omimi. Oke ọsọ ọsọ nke dị ugbu a ruru 2m / s.
California Ugbu a
Ọ bụ oke osimiri oyi nke sitere na Pacific nke na-asọga n'akụkụ ndịda n'akụkụ ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ nke North America, na-emechi mgbasa mmiri n'etiti 48 Celsius na 23 Celsius North latitude. Ọ bụ n'ihi nrịgo nke mmiri oyi site na omimi nke oke osimiri, kpatara ntụgharị a na South nke North Pacific Ugbu a.
Site na ozi a ị ga - amata ihe ọzọ gbasara mkpa osimiri na-asọ na ihu igwe anyị yana etu esi akpụ ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Kedu ihe bụ na otu esi amalite mmiri mmiri?
Smart Green Tower, skyscraper iji gbochie mgbanwe ihu igwe